I-Raw Noopept enamandla (157115-85-0) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-Noopept powder i-molecule ye-Nootropic efana nePiracetam. I-Noopept powder inomthelela ofanayo ku-piracetam powder, ngoba inikeza ngomusa ......
I-Raw Noopept powder (ividiyo ye-157115-85-0)
I-Raw Noopept powder (157115-85-0) Incazelo
I-Raw Noopept enamandla (157115-85-0) Siziqu
Igama Product I-Raw Noopept enamandla
Sukufaneleka I-Raw Noopept enomsoco ngokuyinhloko i-nootropic engenawo amanzi, kodwa ngeke ichithe kalula emanzini noma emanzini.
I-Noopept (i-GVS-111) yigama lomkhiqizo we-N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, i-molecule ye-nootropic yokwenziwa.
I-Noopept inendlela eyinkimbinkimbi yesenzo. Umphumela we-nootropic wesidakamizwa uhanjiswe ngenye ye-metabolites esebenzayo (i-cycloprolylglycine) ifana nesakhiwo esivumelwaneni se-cyclic endogenous ne-anti-amnesic. Kuye kwasungulwa ukuthi lo muthi ukwandisa inkulumo ye-NGF ne-BDNF ku-hippocampus, ibonisa izakhiwo ze-choline-positive kumazinga wokuziphatha ne-neuronal, kunciphisa ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative futhi kuthuthukisa umsebenzi we-antioxidant systems, futhi kuphazamisa ama-kinase pSAPK / JNK kanye ne-PERK1 ekwenziwe. I-Noopept ithuthukisa inkumbulo ngokukhulisa amakhemikhali ebuchopho okuthiwa i-BDNF nakwezinye izindlela.
Imiphumela emibi ye-Noopept powder yinyene futhi abasebenzisi abaningi abatholi nemiphumela emibi nhlobo. Imiphumela emibi emibi embalwa ikhona, kepha uma uthatha le nootropic ngokweqile ngokweqile kungabangela ukukhanda ikhanda, ukukhathala, isisindo sokuqhwaza nokulala.